Xildhibaan Daqarre “Hadii aan Maqaamka Muqdisho laga soo saarin Shirka Garowe waa guul darro wayn” – Kalfadhi
Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland wali waxaa ka socda Shirka madaxda Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul Gobaleedyada waxa uuna galay maalintii Shanaad oo aan ilaa hadda heshiisyo laga gaarin qodobada Shirka.
Dhinacyada ku shirsan Garowe ayaa ka hadlaya qodobo ay kamid yihiin Amaanka, Siyaasadda, Dhaqaalaha, Dhismaha Ciidamada, Dastuurka iyo Doorashooyinka dalka ee sanadka 2021. Sidoo kale waxyaabaha laga hadlayo waxaa kamid ah cabashada ku saabsan muddo xileedka Madaxweynaha Galmudug iyo doorashada sanadkaan ee Jubbaland.
Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim “Daqarre” oo katirsan Xildhibaanada maamulka HirShabeelle ayaa ka hadlay Shirkaas waxa uuna sheegay in ay muhiim tahay in Shirka laga soo saaro qodobo cadeynaya Maqaamka magaalada Muqdisho oo aan ilaa hada cadeyn.
Wareysi uu siiyay Kalfadhi ayuu ku sheegay in madaxda ku shirsan Garowe looga baahanyahay in ay cadeeyaan maqaamka magaalada Muqdisho oo muhiim u ah dhamaan Shacabka Soomaaliyeed maadaama ay tahay magaalo madaxda dalka.
“Hogaamiyaasha ku shirsan magaalada Garowe waxaa looga baahanyahay in ay cadeeyaan Maqaamka magaalada Muqdisho oo muhiim u ah dhamaan Shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo la hadlay Kalfadhi.
“Muqdisho oo aan maqaal lahayn ilaa hadda waa ku ceeb madaxda Shirka uga socdo Garowe, waa in ay ka taliyaan aayaha magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho oo muhiim ah doorashada 2021-ka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Daqarre.
Dhinaca kale waxa uu ka hadlay Shirka daba dheeraaday ee ka socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa uuna sheegay in ay muuqato is jiid jiid dheer oo u baahan in looga gudbo Tanaasul iyo midnimo si loo badbaadiyo dalka iyo dadka.
“Mustaqbalka Soomaaliya ayaa ku xiran hogaamiyaasha ku sugan Garowe waa in ay ku xisaabtamaan in umad dhan oo gaaraysa 15 Milyan ay aayo ka sugayso marka waa in ay go’aanka ay qaadanayaan ka fiirsadaan” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo loo yaqaano Daqarre.